Petition · Codsi ku socoto Madaxweynaha Somalia mudane Hasan Sheik Mohamud.: in la magacaabo #Malala Yousafzai jaa’isada Nobel ee Nabadda. · Change.org
Codsi ku socoto Madaxweynaha Somalia mudane Hasan Sheik Mohamud.: in la magacaabo #Malala Yousafzai jaa’isada Nobel ee Nabadda.
Ahmed Hussen started this petition to Office of the President of the Federal Government of Somalia Codsi ku socoto Madaxweynaha Somalia mudane Hassan Sheik Mohamud.
Bishii Nofembar 9, 2012 waxaan bogga Change.org soo geliyey arji qoraal “petition” oo aan codsanayo in loo magacaabo Malala Yousafzai jaa’isada Nobel ee Nabadda “Nobel Peace Prize”. Arrinkan oo ka mid ah dadaalada caalamiga ah ayaa lagu guuleystay in la soo hoyo in ku dhow 200,000 oo saxiixya ah. Waxaan rajeynayaa in si rasmi ah aan arrintan idin soo hor dhigo toddobaadyada soo socda.
Waxaa jira laba sababood oo ay Malala Yousafzai ku mutaysatay jaa’isada Nabadda ee Nobel. Sababtuna ma ahan in madaxa ay ka toogeen Talibanka. Qadiyadda maanta adduunka ugu weyn waa xaqa ay dadku u leeyihiin in ay wax bartaan, taasina waa midda ay Malala Yousafzai nafteeda u biimaysay. Boqol milyan oo caruurta adduunkani ku nool ayaan dhigan iskuul. Tiradaasi in ka badan barkoodna waa gabdho.
Aduunkana kuma fidin karno hanaan socodka dimuqraadiyadda hadeysan jirin tacliin. Mana ciribtiri karno saboolnimada mana horumarin karno ra’sulmaalka banii’aadanka ee caalamka oo idil hadeysan jirin tacliin. Waxbana kama qaban karno dibaatooyinka bii’ada hadeysan tacliini jirrin. Tan ugu muhimsanna waxay tahay in tacliin la’aan aanan la gaari karin ama lalahaan karin dulqaadka iyo ijaabada loo baahan yahay si aan wax uga qabano dhibaatooyinka aan kor ku soo xusnay.
Waxay Malala Yousafzai bilowday halgankeeda ee ku aaddan xuquuqda tacliinta ayadoo kow iyo toban jir ah. Meel sahlan ayeena ka soo bilowdey iyadoo si daahsan qoraalka baloogga “blog” ku qortay sida ay aad uga murugsan tahay in loo diiday in ay iskuul dhigato. Kadibna waxay dhibaatadeyda hordhigtay dadkoo idil, si adagna uga hadashay, kuna mitiday. Mana aysan gilgilin markii loo caga jugleeyay in la dilidoono.
Markii qofka banii’aadmiga ahi uu u istaago waxa xaqa ah taasina ay keento in ay naftiisu khatar gasho wuxuu qofkaasi galaa goob cusub, goobtaasina dad yar ayaa fahmi kara. In ay Malala diyaar u noqoto in ay nafteeda biimo geliso si ay ugu hadasho codka iyo hamiga malaayiinta caruurta ayaa keentay in ay ka mid noqoto kuwa taariikhda banii’aadmiga u istaagay in ay la dagaalamaan cadaadiska iyagoo naftooda khatar galinaya.
Ficilada ay Malala ku dhaqaaqdey waa kuwa dhaxalgal ah. Waxayna geesiyad u tahay dadkoo idil da’ kastaba ha jiraan.
Jariidadda Time Magazine afti ay qaaday waxay heshay darajada qofka koowaad ee Shakhsiyadda Sanadka “Person of the Year”. Mar dhowna Jariidadda Foreign Policy Magazine waxay ugu magacawday qofka lixaad ee boqolka qofood ee adduunka ugu fikirka sareeya ee sanadka 2012 “100 Top Global Thinkers 2012”, Malala Yousafzai way ku istaahishaa in la siiyo jaa’isada Nobel ee Nabadda “Nobel Peace Prize”.
Ahmed Hussen needs your help with “Codsi ku socoto Madaxweynaha Somalia mudane Hasan Sheik Mohamud.: in la magacaabo #Malala Yousafzai jaa’isada Nobel ee Nabadda.”. Join Ahmed and 10 supporters today.